युवतीहरुले कस्ता यौन कल्पना गर्छन ? | दर्पण दैनिक
युवतीहरुले कस्ता यौन कल्पना गर्छन ?
प्रकाशित मिति: २०७६ मंसिर १५ गते ०४:३६
एजेन्सि । युवकहरुले मात्र होइन युवतीहरुले पनि यौन कल्पना गर्ने र त्यसको मात्रा केटाहरुको भन्दा बढी हुने एक अध्यनले देखाएको छ । यद्यपी केटा र केटी दुवैले यौन सम्बन्धी कल्पना गर्दा करिव करिव उस्तै कल्पना गर्ने अध्यनको निष्कर्ष छ ।
आधुनिक केटा केटीहरुको यौन सम्बन्धी अधिकाँश कल्पना अश्लिल चलचित्रमा आधारित हुने र उनीहरु त्यस्तै कल्पनामा रमाउने गरेको स्वेडेनको उप्साला विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले पत्ता लगाएका हुन् ।
अश्लिल चलचित्र हेर्ने युवा युवतीले त्यस्ता चलचित्रमा देखाइएका गतिवधीलाई वास्तविक जीवनमा अभ्यास गर्नेबारे सोंचिरहने शोधकर्ता माग्दालेना मात्तेवोले बताए ।
पछिल्लो अध्यनबाट निस्केको निष्कर्षले मानसिकस्तरमा लैङ्गिक समानता आइसकेको देखाएको समेत उनको दावी छ । मात्तेवोले स्वेडेनका १६ वर्ष माथिका ८ सय युवतीमाथि यौन सम्बन्धको अनुभव र अश्लिल चलचित्रबारे अध्यन गरेका थिए ।
१० मध्ये एक युवतीले आफूले हेर्नु पर्ने भन्दा कम अश्लिल चलचित्र हेर्ने गरेको अध्यनका क्रममा बताए । त्यतिमात्र होइन युवतीहरुले गर्ने सेक्सको कल्पना कतिपय अवस्थामा युवकहरुले गर्ने भन्दा पनि बढी रहेको उनले पाए ।
अध्यनको अनौठो निष्कर्ष त परंपरागत मैथुन र मुख मैथुनको अनुभव केटाहरुमा भन्दा बढी केटीमा पाइयो । यद्यपी सेक्स पार्टनर भने केटीको तुलनामा केटीहरुले बनाएको पाहियो ।
नेपालका मानव अधिकारकर्मी राउतलाई भारतमा सम्मान
२०७७ जेष्ठ २० गते ०७:१७
चित्रकुमार कार्की, काठमाडौं । सप्तरीका मानव अधिकारकर्मीलाई भारतमा सम्मान गरिएको छ । लामो समय देखि मानव अधिकार क्षेत्रमा लागि निरन्तरण रुपमा काम गर्ने सप्तरी महादेवाका २७ वर्ष प्रकाशमणी राउतलाई नेशनल हयुमान राईटस अर्वाडवाट सम्मानित गरिएको हो । नेशनल हयुमान राइट संस्थाले राउतलाई समाजिक सिफाही अर्वाडवाट सम्मानित गरेको छ । बिश्व कोरोना महामारीले बिभिन्न देश लगायत भारत र नेपाल समेत लकडाउन भोगीरहेको अवस्थामा राउतलाई समाजिक संजालवाट प्रमाणपत्र पत्र सहित सम्मान गरिएको हो ।
नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन अनुरोध
२०७७ जेष्ठ २० गते ०८:४६
लण्डन । नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को यही जेठ १२ गतेको निर्णयबमोजिम ‘कोभिड–१९ विश्वव्यापी सङक्रमणका कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७’ जारी भएको सन्दर्भमा नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको राजदूतावासद्वारा सोमबार जारी सूचनामा जनाइएको छ ।